गर्भवती महिलाले झुक्किएर पनि खानुहुँदैन यी खानेकुरा नत्र, आमा,शिशु दुबैलाई खतरा – Dainiksamchar
HomeHealthगर्भवती महिलाले झुक्किएर पनि खानुहुँदैन यी खानेकुरा नत्र, आमा,शिशु दुबैलाई खतरा
गर्भवती महिलाले झुक्किएर पनि खानुहुँदैन यी खानेकुरा नत्र, आमा,शिशु दुबैलाई खतरा
October 12, 2020 admin Health 3739
काठमाडौँ । गर्भावस्थामा रहेका महिलाहरूलाई फरक फरक किसिमका खानेकुरा खान मन लाग्छ । कोही महिलालाई अमिलो पिरो खान मन पर्छ त कोही महिलालाई गुलियो । यस्ता चिजहरु खान मन लाग्ने सामान्य कुरा हो । कोही महिलाहरुलाई यस्तो पनि हुने गर्दछ, गर्भावस्था हुनु भन्दा पहिला मन नपर्ने चिजहरु गर्भावस्था पछि मन पर्ने गर्छ ।
यस्तो पनि देखिएको छ केही महिलाहरु माछा, मासु खान छाडेर शाहाकारी खाना मन पराउने गर्छन् । यो पनि मान्ने गरिन्छ आइरनको कमिको कारण गर्भवती महिलालाई अनेक किसिमका खानेकुराहरु खाने मन लाग्दछ । केही अध्ययनबाट शरिरमा जिनको कमिको कारण पनि गर्भवती महिलाहरूमा यस्तो किसिमको लक्षण देखा पर्ने पत्ता लागेको छ ।
तर केही चिजहरू यस्ता पनि हुने गर्छन् जसका कारण गर्भमा रहेको बच्चालाई खतरनाक हुन सक्दछ । यदि तपाई गर्भावस्थामा हुनुहुन्छ भने केही त्यस्ता चिजहरु नखानुहोस् जसबाट तपाई र तपाईको बच्चा दुवैलाई बेफाइदा हुने गर्छ ।
१ जङक फुड :
गर्भावस्थामा रहेका कैयौँ महिलाहरु जङ्क फुड धेरै मन पराउनुका साथै खाने पनि गर्छन् । तर बजारमा प्राप्त हुने सबै जङक फुड फाइदाजनक हुँदैनन् । केही जङक फुडले शरिरमा न्यूट्रियइटस्को मात्रा कमी हुने गर्दछ, जसको कारण गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यमा नोक्सान पुर्याउने गर्दछ । त्यसैले यो अवस्थामा रहेका महिलाहरुले जङक फुडहरु खानुको सट्टा पौष्टिक खानाहरु खान उपयुक्त हुन्छ ।
२ . काटेर राखेको फलफूल र सलाद :
गर्भवती अवस्थामा हरियो सागपात र फलफूल खानाले बच्चा र आमा दुवैलाई फाइदाजनक हुन्छ । तर यस अवस्थामा रहेका महिलाहरूले लामो समय काटेर राखेको फलफूल तथा सलादहरु खानु हुदैँन किनकी यसरि लामो समय काटेर राखेको चिजहरुमा ब्याक्टेरिया ९किटाणु० रहन सक्ने सम्भावना बढि मात्रामा हुने हुदाँ ताजा फलफूल, सलाद र हरियो तरकारी खानु पर्दछ ।
३ . कफी :
गर्भावस्थामा रहेका महिलाहरूलाई एक कप कफी पिउनाले धेरैनै राहात मिल्ने गर्छ । तर धेरै महिलाहरूलाई थाहा छैन होला कफिमा हुने कैफिनले गर्भमा रहेको बच्चालाई ज्यादा खतरा त हुन्छ नै यसबाट बच्चाको तौल पनि कम हुन्छ । धेरै कफि पिउनाले गर्भवती महिलाको प्रेशर बढ्नुका साथसाथै बार बार पिसाब लाग्ने गर्दछ, जसकारण शरिरमा पानिको मात्रा कमि भई डिहाइड्रेशनको शिकार बन्न सक्ने सम्भावना बढि हुन्छ ।
४ . डेरी उत्पादित पदार्थ :
गर्भवती महिलाहरूलाई डेरी उत्पादन भएका पदार्थहरु दूध, दही, घ्यू इत्यादि खानाले धेरै लाभदायक हुने मान्ने गरिन्छ । तर यसरी डेरिमा उत्पादन भएका पदार्थहरुमा असुरक्षित हुनुका साथै ब्याक्टोरिया (किटाणु) प्राप्त हुन्छ । यसबाट फुड पोइजन, डाइरिया, ऐठन र बान्ता हुन सक्दछ, जसकारण गर्भवती महिलाको डिहाइड्रेसन, ज्यादा थकाई अथवा किड्नी फेल हुने बढि खतरा हुन्छ ।
५ . काँचो मासु :
केही गर्भवती महिलाहरु काँचो मासु खान रुचाउँछन् । तर यस प्रकारका खानाका चिजहरुमा भारी मात्रामा ब्याक्टोरिया (किटाणु) र प्यारासाइट प्राप्त हुन्छ । विशेष त काँचो खानाका चिजहरु स्वस्थ मानिसको लागी त एकदम खतरनाक हुन्छ भने तपाई आफैँ सोच्नुहोस् गर्भवती महिलाहरुलाई कति खतरनाक हुन्छ । त्यसैले यस अवस्थामा रहेका महिलाहरुलाई पाकेको मासु खान उपयुक्त हुन्छ ।
६ . माछा :
माछा खानाले गर्भमा हुर्किरहेको बच्चा र आमा दबैलाई धेरै फाइदाजनक हुने गर्छ । तर बजारमा विभिन्न किसिमका माछाहरु पाइन्छन् । जसमध्ये केही माछाहरु खान गर्भवती महिलाहरूका लागी हानिकारक हुन्छन् । यस अवस्थामा रहेका महिलाहरूलाई बङगाली माछा, ह्वाइट टूना, स्वर्ड माछा र शार्क माछाहरु खान सुरक्षित र बढि उपयुक्त हुन्छ ।
७ . अल्कोहल :
अल्कोहल एउटा यस्तो चिज हो, जुन गर्भावस्थामा रहेका महिलाहरूले बिल्कुल सेवन गर्नु हुदैन । यसको सेवन गर्नाले गर्भमा रहेको बच्चालाई मात्र नभई तपाईको पुरै जिन्दगीमा असर पर्दछ । यदि तपाईहरूमा अल्कोहल छोड्नै नसक्ने समस्या भए डाक्टर सँग सल्लाह गरेर मात्रै यसको प्रयोग गर्नुहोस् ।
October 12, 2020 admin Health 4364
काठमाडौँ । मानिसको जीवनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा स्वास्थ्य मानिन्छ भने दोश्रो महत्वपूर्ण कुरा धन। तर पहिलो धन भएन भने दोश्रो धनले काम दिँदैन। जतिसुकै कमाए पनि स्वास्थ्यमा समस्या छ भने मानिसले जीवनमा शान्ति अनुभव गर्दैन।
यस्ता समस्या भएकाहरुले भुलेर पनि नखानुहोस् लसुन, नत्र
September 27, 2020 admin Health 3330
काठमाडौँ । हाम्रो भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने लसुन स्वासथइको लागि निकै फाइदाजनक छ। खासमा तरकारीमा स्वादको लागी प्रयोग गरिने लसुन धेरै उपयोगी छ। यसमा प्रशस्त औषधीय गुण हुन्छ । यसको प्रयोग गर्न जानेमा बिभिन्न रोग
October 3, 2020 admin Health 1047
एजेन्सी – मानिसहरु सुन्दर , आर्कषक र चम्किलो छाला बनाउनको लागि धेरै महङ्गा छालालाई सेतो बनाउने क्रिमको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तर यस्ता क्रिमको प्रयोगले हाम्रो छालालाई हानी गर्दछ । आज हामी तपाइँलाई छालाको समस्याबाट
LEX 18 agenda conversation: Job club (121747)
digital tendencies live recently welcomed Lauren abettor (113650)
Hello world! (113323)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (112081)